विवाहको १५ दिनपछि दुलहीको वास्तविक अनुहार देखेर केटा स्तब्ध भए, के थियो त्यस्तो मेकअप ? – My Blog
विवाहको १५ दिनपछि दुलहीको वास्तविक अनुहार देखेर केटा स्तब्ध भए, के थियो त्यस्तो मेकअप ?
No Comments on विवाहको १५ दिनपछि दुलहीको वास्तविक अनुहार देखेर केटा स्तब्ध भए, के थियो त्यस्तो मेकअप ?
गोरखपुर। उत्तर प्रदेशको गोरखपुर जिल्लाबाट एउटा अचम्मको खबर आएको छ। जहाँ एक परिवार दुलहीको आगमन मनाइरहेका थिए। तर विवाह को १५ दिनपछि दुलहीको वास्तविक अनुहार उजागर भयो । जब उनको वास्तविक अनुहार उजागर भयो बेहुला नै बेहोस बने । लामो समयसम्म उनी सत्य लुकाउन चाहान्थिन् । तर दुई हप्तापछि सत्य डगमगायो । दुलाहा र उसको परिवार यति ठुलो धोका देखेर छक्क परे। त्यसपछि विषय सम्बन्ध बिच्छेदसम्म पुग्यो।
यसरी खुल्यो दुलही को रहस्य
वास्तवमा, विवाहको १५ दिनपछि यो थाहा भयो की दुलहीको टाउकोमा एक ठूलो खत थियो । खतमा कपाल थिएन । टाउकोको झण्डै आधा भाग नै कपाल थिएन। दुलहीको परिवारले केटी र उसका आमा बुबालाई धोका दिएको आरोप लगाएर सम्बन्ध छुटाएका छन् । दुलहीको परिवारले दुलहीको बिहे गरेको १५ दिनपछि सम्बन्ध तोडेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
दुलहीको अनुहार देखेर दुलहाले उनलाई आफ्नो मातृ घरमा छोडे।
यो आश्चर्यजनक मामला पीपीगञ्ज क्षेत्र को हो। जहाँ १५ दिन पहिले दुबै परिवार खुशीले बिहे गरेका थिए। सबै ठिकठाक चलिरहेको थियो। दुलही दुई सातासम्म ससुराको घरमा बसेकी थिइन्। उनको टाउकोमा कपाल थिएन । एक दिन केटी लुगा लगाईरहेकी थिइन् त्यही बेला टाउकोमा लगाएको नक्कली कपाल खस्यो । त्यसपछि ससुरालाई यो कुरा थाहा भयो।
दुलहा र दुलही विवाहपछि पुलिस स्टेशन पुगे
बिहीबार दुबै पक्षका मानिसहरु आ–आफ्नो उजुरी लिएर पीपीगञ्ज पुलिस स्टेशन पुगे। एसएचओ सत्यप्रकाश सिंहले भने केटीको टाउकोमा कपाल नभएका कारण उनका पतिले उनलाई घरबाट निकालेको उजुरी आएको छ । केटा पक्षले भने धोका दिएर ढाँटेर विवाह गराएको उजुरी दिएको छ । यदि दुबै पक्षहरुबीचको वार्ता समाधान भएन भने मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गरिनेछ उनले बताए ।
← हैटीमा शक्तिशाली भूकम्प, ३०० भन्दा बढीको मृत्यु, १८ सयभन्दा बढी घाइते → काठमाडौंको बसन्तपुरमा देखिएको यो एउटा निकै दुखदायि दृश्य (भिडियो सहित)